Tily eto Madagasikara : 80 taona ny Louveteaux | NewsMada
Tily eto Madagasikara : 80 taona ny Louveteaux
Mankalaza ny faha-80 tapna nijoroany ny Louveteaux ao anatin’ny Foibe Tily eto Madagasikara. Nanatanteraka lasin’ny Mpihaza izy ireo ny faran’ny taona teo tany Miarinarivo Itasy.
Nahatratra 140 mahery ny Louveteaux tonga nanatrika izany lasy goavana izany. Nahatonga solontena avokoa ny sampana rehetra avy amin’ny faritra manerana ny Nosy. Raha ny fanazavana, lasy lehibe atrehin’ny solontenan’ny Louveteaux enina voafantina isam-paritany ity lasin’ny Mpihaza ity.
Fotoana hanomezana ireo mpizaika ny tsara ho fantatra mikasika ny fiainan’ny Louveteaux sy ny fitaizana ary ny fifampifehezana ny lasy. Hifampizarana amin’ny Louvteaux , aman’izany fifampizarana izany avy eo.
Nahafahana nampahafantatra ny ankizilahikely ny fitaizan-tsaina sy ny tsongodia, vona (teknika skoto), “morse”… izany lasy izany.
Marihina fa mbola hisy ny lasy goavana hiarahan’ny Louveteaux rehetra any amin’ny fialan-tsasatra lehiben’ny mpianatra ho ivon’ny fankalazana ny faha-80 taona izay hotanterahina any amin’ny faritra Atsinanana.
Tsiahivina fa ireo ankizilahikely 6 ka hatramin’ny 11 taona no tezaina ao anatin’ny Louvteaux.